Tetibola ho an'ny daholobe 2020 | UNICEF Madagasikara
Tetibola ho an'ny daholobe 2020
Mba ho fantatry ny olom-pirenena hoe aiza no alehan’ny volany
Direction Générale du Budget (MFB)
Ny Tetibolam-panjakana, izay fitaovana fototra ilaina amin'ny fampiharana ny politikam-panjakana, dia mitatitra momba ny fomba fampiasana ny volam-panjakana na ny vola miditra izany ny vola mivoaka. Ny antontan-taratasy ho an’ny olom-pirenena, antsoina hoe " Tetibolan’ny daholobe " dia anisan’ny fandraisan’andraikitra noraisin’ny Minisiteran'ny toekarena sy ny Tetibola (MEF). Ny tanjona amin’izany dia ny fampahafantarana ny olom-pirenena tsirairay ireo vaovao mahakasika ny teti-bolam-panjakana.
Ity antontan-taratasy ho an’ny olom-pirenena ity, izay mifandray amin'ny didy hitsivolana momba ny tetibolam-panjakana 2020, dia midika ho fampidirana ny tetibola mifandraika amin’ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ho an’ity taona ity ao anatin’io tetibolam-panjakana io. Hasongadina amin’izany ireo fomba fijery lavitra sy mivelatra ary ireo fironana ara-tetibola lehibe ho an'ny taona 2020. Io antontan-taratasy io araka izany dia mampiseho ny laharam-pahamehan'ny governemanta izay misoratra ao anatin’ny politikam-panjakana ankapobeny.
Ity fahavononana hisokatra amin'ny olom-pirenena ity dia manampy ireo ezaka rehetra efa notanterahina teo amin'ny lafiny fanavaozana ny fitantanam-panjakana. Hitohy ihany koa ny fampahalalana izany amin'ny alàlan'ny fanapariahana io antontan-taratasy io eny anivon’ny olom-boafidy maro kokoa. Araka izany, angatahina ny rehetra hizara izany Tetibola ho an'ny daholobe izany, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fangaraharana ara-tetibola. Ny famokarana an'ity antontan-taratasy ity dia vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny UNICEF izay isaorantsika manokana.
Frantsay, Malagasy, Anglisy
Sokafy ilay singa hahafahanao maka izay tatitra mahaliana anao (misy amin'ny teny Malagasy, frantsay, anglisy)
Safidy Teny frantsay Teny Malagasy Teny anglisy
(PDF, 5,54 MB) (PDF, 0 B) (PDF, 5,52 MB)